Dr Biraanuu Naggaa: Jijjirama kanatti amanee qabsoo hidhannoo dhaabuuf yeroo nutti hin fudhanne - BBC News Afaan Oromoo
Dr Biraanuu Naggaa: Jijjirama kanatti amanee qabsoo hidhannoo dhaabuuf yeroo nutti hin fudhanne
Dr Biraanuu Naggaa gaaffiifi deebii BBC waliin taasisan irratti dhaabni isaanii jijjirama biyyatti dhufaa jiru amanee fudhachuun kara nagaa qabsaa'uuf yeroo itti hin fudhanne ture jedhan.
Waamicha mootummaan paartilee hidhannoon qabsaa'aniifi biyyaa turaniif taasiseen gara biyyaatti galan keessaa paartiin isaanii Ginbot 7 isa tokko.
Dr Biraanuu Naggaa filannoo A.L.I 1997 gaggeefame dhugaafi haqa qabeessa hin turre jechuun erga paartiin isaanii yeroo sanaa Qinijit mootummaa waliin wal dhabee hidhamanii bahuun fuula isaanii gara qabsoo hidhannootti deebisan.
Teessoo isaa Eertiraa kan taasifate Ginbot 7 sirna mootummaa ture mormuuf qabsoo kan gaggeessa ture yoo tahu Dr Biraanuu Naggaas hogganaa paartichaa tahuun hojjechaa turan.
Dr. Abiy Ahimad hayyu duree ABO waliin wal argan
'Humnootiin hidhatan filannoo fulduraatiif sodaadha'
Dr. Birhaanuu Naggaa torban muraasaan booda biyya gala
Itti aanaa isaanii kan turan Andaargaachew Tsiggees akkasuma waliin hojjechaa turuun Yamanitti qabamanii gara biyyaatti galfamuun mana hidhaa seenan.
Yeroo seena Niwu Yoorki kan turan Dr Biraanuun naasuu guddaan jiraatus ani mul'ataa fi kaayyoo Andaargachew waanan beekuuf isa galmaan gahuuf hojiikoo irrattan xiyyeeffadhe jedhan Dr Biraanuu Naggaa.
Gara Biyaatti Galuu.....
Dr Biraanuu : ''Nuyi tooftaa qabsoo wayita jijjiirru gaaffii guddaa kan ture Abiy faa yommuu gara taayitaatti dhufan ADWUI bifa haaraan itti fufsiisuuf moo dhuguma jijjiirama barbaadu kan jedhu murteessuu ture.
Jarri kun waanuma Wayyaaneen duraan hordofu warra hordofan akka hin taane baruuf yeroo dheeraa nutti hin fudhanne.
Tokkoffaa jarri kun kan dhufan qabsoo uummataatiini. Sirni ADWUI inni duraanii injifatamee kan dhufan akka ta'e homaa shakkiin hin turre.
Kana al tokko erga murteessinee booda gaffii maaltu jiraree?'' jedhan.
''Jarri kun sirna dimokiraasii dhugaa barbaadu jettee erga murteessitee akkuma ta'etti wal gargaartee sirna sana gadi dhaabuuf yaalta malee, akkuma warra duraanii qawweedhumaanan itti fufa hin jettu.
Qabsoo hidhannoo nuyi takkaa akka waan gaariitti ilaallee hin beeknu, filannoo dhabnee itti galle, jechuun BBCtti himan.
''Wanti sana dirqama hin taasifne gaafa uumamu, daqiiqaa osoo nutti hin fudhatiin deebinee gara qabsoo karaa nagaa isa dhugaafi sochii diimokiraasii isa dhugaa wayya jennee itti seenne.''
Dr Biraanuun haala dinagdee waggota 27 darbanii ilaalchisee namootni dhuunfaa muraasa qabeenya uummataan yeroo gabaabaa keessatti kan ittiin duroomanidha jedhan.
'' Humni jijjiirama haaraan kuni sirni diinagdee inni dhaale kan saamichaati. Isa afaan Ingiliziin 'Bandit Capitalism' sirna diinagdee shiftaa waanuma argatte saamtee deemtu wayiitu ture,'' jedhan.
Pirojeektotni akka daandii baaburaa fi kanneen biroo hedduun hojjetamaa turanis yeroo garaagaraatti yeroo jedhame keessatti xumuramuu dadhabuu waliin wal qabatee uummatni komii kaasaa tureera.
Dr Biraanuunis, ''Pirojeektoonni jedhaman hundi hannaaf jedhamanii kan tolfamanidha, kanaafi kan dafanii hin dhumneef, bajata qabameef ol kan itti bahaa jiruufis.
Kuni hundi ammoo liqaa maqaa uummataan argamuuni. Liqaan kuni hundi tuulamee amma biyya liqaan biliyoonni 30 irra jiru taateetti.
Namoonni sirna kana dhaalan rakkoo guddaatu isaan eeggata. Tokkoffaa liqaa kana kafaluu lammaaffaan ammoo aadaanumti daldalaa iyyuu u bade jira.
Sirna diinagdee hannaafi saamichaanan duroomuu jajjabeessutu uumame kan jedhan Dr Biraanuun Sirni diinagdee akka kanaa yeroo mara rakkisaadha jedhan.
Sadarkaa Macro-economy'tti rakkoo jiru furuu mitii aadaadhuma siyaasaa jijjiiruun mataan isaa hojii cimaa barbaada jedhanii Kana sirreessuuf garuu dursa sirni siyaasaa jijjiiramuu qaba jedhan.
Ijaarsa naannolee fi humna waraanaa
Naannooleen salgan Itoophiyaa kan ijaaraman sabummaa irratti xiyyeefachuun yoo tahu kun matuma isaan rakkoo qaba jedhan.
Waggoota 27 darban keessa kan uumame ijaarsi naannolee kan sabummaa irratti xiyyeeffate ta'uu isaa qofa osoo hin taane, naannoleen akka kanaan ijaaraman amma waraana mataa isaanii qabu jedhan Dr Biraanuun.
''Warri amma naannolee jennuun kun biyya waraana kuma 20 hanga kuma 30, darbees miliyoona walakkaa hanga miliyoona tokkoo qaban ta'aniiru.''
Biyya tokko keessatti waraana hanga funyaaniitti hidhatee naannoleen hundi qabaachuu hin qaban kan jedhanii humni mootummaa hundaaf qixa dhaabbatu, raayyaan ittisa biyyaa qofa biyya tokko keessa jiraachuu qaba jedhan.
Kanaafuu humna waraanaa kana bakka tokkotti deebisanii ijaaruu fi bakkaa bakkatti walitti bu'iinsa saboota gidduutti uumamu dhaabsisuun rakkisaa tahuus himaniiru.
''Akka biyyaatti ykn rakkoo kana keessaa baanee waliin badhaadhna ykn waliin diigamna. Sabni tokko qofaatti fayyadamee kaan miidhamuu hin danda'u.'' jedhan.
Miira kana deebisanii uummata keessatti uumuun, biyya mirgi, afaanii fi aadaan hunda keenyaa keessatti kabajamu fi biyya tasgabboofte ijaaruun rakkoo guddaa Dr. Abiy qofa ilaallatu osoo hin taane hunda keenya kan mudatudha jedhan.
'' Garuu sirnaan waliin dubbachuu dandeenyaan inuma irra aanna,'' jedhan.
Qabeenya isaanii mootummaan fudhate
Paartiin Dr Biraanuufaa shororkeessaa jedhamee erga galmaa'ee mootummaan qabeenya isaanii bakka garaagaraa ture fudhateera.
Erga gara biyyaatti galanii isiniif deebi'eera gaaffii jedhuuf biyya uummata miiliyoonni hedduun rakkatu keessa qabeenyikoo naaf haa deebi'u dhimmi jedhu anaaf waanta guddaa miti kan jedhan Dr Biraanuun hanga ammaattis akka hin deebineef BBCtti himaniiru.
Deeggartoota isaanii ilaalchisee
Paartiin isaanii akka biyyaatti kan hojjetu tahuu himanis naannolee akka Amaaraattis tahe Oromiyaa akkasumas naannolee kaan keessatti deeggarsa bal'aa akka hin qabne himama.
Dr Biraanuun kun nu hin yaaddessu jedhanii dhimmi sabummaadhaan qofa siyaasa yaaduu yommuu sirrachaa dhufu taha jedhan.
Itoophiyaa keessatti osoo dhaloota lamaa fi sadii dabartee lakkoofte namoota hedduunsaboota biroo waliin wal makan argatta jedhanii isaan kunneen siyaasa sabummaa irraa bilisa tahe barbaadu jedhan.
Yoo yaada gaarii fi qulqulluu tahe uummanni barbaadu dhiyeessine uummatni Itoophiyaa siyaasa miiraa fi sabummaa irraa bilisa tahe barbaada jennee amanna jedhan Dr Biraanuun.
Yeroo dheeraa keessattis guddinaa fi egeree biyya keenyaaf kun barbaachisaadha jedhan.
Hariiroo Ginbot 7 fi ABO
Hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo waliin wayita Eertiraa turre wal agarree hin beeknu kan jedhan Dr Biraanuun miseensota ABO waliin garuu wal argaa turree jedhan.
Akkasumas loltoota Adda Bilisummaa Oromoo keessaa bahanii gara keenya kan dhufan miseensota dhalattoota Oromoo ta'an qabna jedhan Dr Biraanuun.
''Dhaabni keenya sabarraa bilisa ta'ee Itoophiyaanota hundaaf banaa waan ta'eef Oromoonis, Amaarris, Tigireenis ni dhufa. Kanaaf loltoota Adda Bilisummaa Oromoo kan turan miseensota qabna turre,'' jedhan.
Oromoota Asmaraa keessa jiraatan waliin hojjetaa akka turanis himanii akka dhaabaatti hanga yeroo dhiyootti ODF waliin akkaumas Kamaal Galchuufaa waliin socho'aa akka turan ibsaniiru.
''Obbo Daawud waliin yeroo dhumaaf kan wal agarree dhimaaf Eertiraatti yeroon deebi'e buufata Xiyyaaraatti ture. Nagaa wal gaafanna. Asittis wal agarree jirra.
Marii paartilee siyaasaa eegalame keessatti marii gaarii akka goonu nan amana.'' Dr Biraanuu Naggaa.
Dr. Abiy Ahimad: Hayyu duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin mari'tan
Yeroo dhuma kan haaromfame: 10 Caamsaa 2021
Putiin gaggeessaa Yukireen Raashiyaaf amanamaa ta’e kaa’uuf shiraa jira jedhame
Keenyaan waraanni Itoophiyaa akka dhaabbatuuf walitti dhiyeenyaan hojjechaa akka jirtu ibsite
Sababoota shanan garee biyyaalessaa Itoophiyaa qabxii dhabsiisan